तीन दिनको शेयर कारोबार : २३ अर्ब ३९ करोड बढीको शेयर खरीदविक्री – BUSINESSPANA.COM
तीन दिनको शेयर कारोबार : २३ अर्ब ३९ करोड बढीको शेयर खरीदविक्री
काठमाडौं -यो साता शेयर बजारमा रू. २३ अर्ब ३९ करोड ६ लाख ४७ हजार बढीको कारोबार भएको छ ।
बजार खुल्ने पाँच कारोबार दिनमध्ये यो साता दुई दिन सार्वजनिक विदा परेको थियो । त्यसैले यो साता तीन दिनमात्र शेयर बजार खुलेको हो ।
यो साता पहिलो कारोबार दिन रू. ७ अर्ब ६१ करोड ८ लाख २८ हजार, दोस्रो दिन रू. ७ अर्ब १५ करोड ३१ लाख ५१ हजार र तेस्रो दिन रू. ८ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ६८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
साताको तीन कारोबार दिनमा ४ करोड ७५ लाख ३३ हजार ७४४ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । गत साता पाँच कारोबार दिननै खुलेको बजारमा रू. ३७ अर्ब ६० करोड ५० लाख ३ हजार बराबरको ८ करोड १ लाख ३७१ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
गत साता भन्दा यो साता कुल बजार पूँजीकरण रकम रू। ८४ अर्ब ६९ करोड १२ हजारले वृद्धि भएको छ । गत सातासम्म रू. ३७ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड ९० लाख ७ हजार रहेको कुल बजार पूँजीकरण रकम यो सातासम्म रू. ३७ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड ९० लाख पुगेको छ ।
Previous: नेपालगञ्जको वागेश्वरी मन्दिरमा माछापुच्छ्रे बैंकको क्यु.आर कोड सेवा
Next: विरेन्द्र नौभाग्य र सोनि तामाङ्गको फिचरिङ्गमा ‘तिम्रो मनमा ’ भिडियो सहित ।